Godina Harargee lixatti waajiri MWD Aana Odaa Bultum bara bajataa 2013tti wajjirota motummaa Aanichaa keessatti argamaniif meeshaalee barreffamaa adda addaa, meeshaalee qulqullinaaf olaan, meeshaalee dhumoo adda addaa fi meshaalee dhabboo (elektironiksii fi farnicharaa ) caalbaasii ifaatiin waldorgomsiisee bituu waan barbaaduuf dorgomtootni ulaagaa armaan gadii gutan dorgomuu ni danda'a | | Awash Tenders
Godina Harargee Lixatti Waajiri MWD Aana Odaa Bultum Bara Bajataa 2013tti Wajjirota Motummaa Aanichaa Keessatti Argamaniif Meeshaalee Barreffamaa Adda Addaa, Meeshaalee Qulqullinaaf Olaan, Meeshaalee Dhumoo Adda Addaa Fi Meshaalee Dhabboo (elektironiksii Fi Farnicharaa ) Caalbaasii Ifaatiin Waldorgomsiisee Bituu Waan Barbaaduuf Dorgomtootni Ulaagaa Armaan Gadii Gutan Dorgomuu Ni Danda’a
Godina Harargee lixaattii Wajjirii MWD Aana Odaa Bultuum
Beeksisa caalbaasii ifaa
Godina Harargee lixatti waajiri MWD Aana Odaa Bultum bara bajataa 2013tti wajjirota motummaa Aanichaa keessatti argamaniif
meeshaalee barreffamaa adda addaa, meeshaalee qulqullinaaf olaan, meeshaalee dhumoo adda addaa
fi meshaalee dhabboo (elektironiksii fi farnicharaa ) caalbaasii ifaatiin waldorgomsiisee bituu waan barbaaduuf dorgomtootni ulaagaa armaan gadii gutan dorgomuu ni danda’an.
Dorgomtotni hayyama daldalaa hojii kanaan wal qabatu irratti bobba’aanii fi ragaa kafalaa gibiraa (TIN) fi galma’aa VAT kan ta’an gibiraa motummaa bara kanaa kafaluun hayyamni hojiiisaanii kan haromee dhiheffattu kan danda’ anii fi akkasumas facatii dhihessaa meeshaalee wajjira motummaa (supplier list) irratti hirmaatuof ragaa dhiheeffatuu kan danda’an.
Dorgomtotni sanada caalbaasii guyyaa beksisni kun gaazexaa Addis zamaniin ba’e irraa eegalee guyyoota hojii walitti anu guyyaa 15 giddutti wajjira MWD aanaa Odaa Bultum ademsaa bittaa fi bulchinsa qabenyaa sa’aatii hojii motummaatti dhihastuun maallaqa hin deebine qarshii 100.00 (dhibba tokko) kafaluun bitachuu ni danda’an.
Dorgomtootni kabachiisaia caalbaasii qarshi 10,000 (kuma kudhan) maallaqa callaadhaan ykn CPO baankiitiin mirkanaa’cen osoo caalbaasichi hin banamin dura dhiheuffatuu qaban.
Dorgomtootni sanadaa yaada dorgommii gatii isaanii guutuun postaa lamaan orijinalaa fi koppii isaa addaan baasuun sumuda dhabbatichaa ittihahuun samiidhaan saamsuun hanga guyyaa 19/2/2013 sa’aatii 4:00tti kutaa bittaa fi bulchinsa qabenyaa saanduqa caalbaasii kanaaf qophaa’e keessa galchuu qaban. Caalbaasiсhis guyyuma kana ganama sa zatii 4:00ti cufamee sa’aatii 4:30 bakka dorgomtootni ykn bakka bu’oonni argamanitti ni banama Haata’uu malee dorgomtootni ykn bakka bu’oonni argamuu dhabuun adeemsa caalbaasicha hin gufachiisu. Guyyaan heerame ayyaana ykn wajjinti cufaa yoo ta’e caalbaasichi guyyaa hojii ittiaanu sa’aatii walfakkaataatti ni banama.
Dorgomtotnii caalbaasii irratti mo’ataman kabachisni caalbaasii qabsisan yeroodhuma sanitti kan deebi’uuf ta’a.
Qulqullina meeshaa ilaaluuf meeshaalee saamsaman ergaa banamanii booda rakkoo qulqullinaa kan qabatuu yoo ta’e dhaabbatni mo’ataa ta’e meeshaa qulqullina qabu bakka buusuuf dirqama qaba.
Dhabbatni mo’ataa ta’e mo’ataa ta’uun isaa itti himamee guyyaa 5 (shan)keessatti amma mallaqaa mo’atee irraa parsantii(%) 10 qabsiisuun walii galtee mallatteessuu qaba.
Dhaabbatni mo’ataa ta’e meeshaalee mo‘ate dhihessuuf walii galtee mallatessee guyyaa walii galtee malleteesse guyyaa 15 keessatti dhihessuu qaba. Yoo guyyaa jedhametti dhihessuu baate guyyaa xumura walii galtee irraa egalee guyyaa guyyaan parsantii(%) 0.1 kan adabamu ta’a.
Dhaabbatni mo’ate meeshaalee mo’ate kanfaltii geejjibaa fi korsiisee buusaa baasii mataa isaatiin hanga waajjira MWD Aanaa Odaa Bultumitti dhiheessuu qaba.
Dhabbatni mo’ataa ta’e walii galtee mallatessee meeshaa walit galtee irratti ibsamen ala gose meeshaa biraa jijjiiruun ykn meeshaan magaalaa irra hin jinu jechuun yaada dhihaatuuf wajjira biratti fudhatama hin qabu.
Wajirichi casibsasii kana gartokkeen ykn guutumaan guutuutti haquuf mirga guuuu qaba.
Teessoon: Godina Harargee Lixaa Aanaa daa Rultum